Fanonganam-panjakana 2009 : Nahatratra 214 ireo CSBII nikatona -
AccueilRaharaham-pirenenaFanonganam-panjakana 2009 : Nahatratra 214 ireo CSBII nikatona
20/02/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Nitondra faisana lehibe teo amin’ny tondro ara-toekarena sy ara-tsosialy teto Madagasikara, fa indrindra teo amin’ireo mponina tena marefo ny faharetan’ny krizy politika, vokatry ny fanonganam-panjakana nataon-dRajoelina Andry. Nanomboka teo dia nihamafy ny fahantran’ny vahoaka malagasy ka nidina niaraka tamin’izany ny UNAP (Indice de developpement humain) izay nampidina ny laharan’i Madagasikara ho 143 amin’ny firenena 177, araka ny tatitry ny banky iraisam-pirenena. Raha 76,5 isan-jato ny tahan’ny fahantrana ny taona 2010 dia niakatra be indray ny taona 2012 satria efa nihoatra ny 80 isan-jato satria niato avokoa ny fanampiana avy any ivelany ny taona 2009, indrindra teo amin’ny famatsiam-bola, ka nisy fiantraikany mivantana tamin’ny hafainganan’ny fandrosoana. Ity krizy politika novolen-dRajoelina ity, izay niteraka fanafoanana tanteraka ny ezaka vita tamin’ny fampandrosoana ny firenena teo amin’ny lafin’ny fahantrana ny taona 2002 sy 2007.
Eo amin’ny lafiny ara-tsosialy izay hatrany, dia nitondra faisana goavana teo amin’ny sehatry ny fahasalamana teto amin’ny firenena ihany koa ny fanonganam-panjakana iny. Raha ny tatitry ny rafitra ny firenena mikambana eto Madagasikara, dia nahatratra 214 ireo CSBII nikatona tamin’ny volana jona 2010, ary 19 tamin’ireo tany amin’ny faritra Androy, Anosy ary Atsimo Andrefana. Toe-javatra izay nampihena ny fahasalaman’ny 11,6 isan-jaton’ireo mponina tany amin’iny faritra iny, hoy hatrany ny fanamarihan’ny rafitry ny firenena mikambana. Ho an’ny tany amin’ny faritra Itasy izao am-polony no nikatona tamin’ny taona 2011, vokatry ny tsy fananana mpitsabo sy mpitsabo mpanampy. Ireto farany izay voatery mandao ny toeram-piasany, satria tsy naloan’ny FATE ny valin-kasasaran’izy ireo. Ny fanafody rahateo tsy misy. Mazava ho azy fa miteraka fahasahiranana ho an’ny vahoaka any an-toerana izany satria ireo toeram-pitsaboana manakaiky ny sarambabem-bahoaka mihitsy no tsy misy miandraikitra. Noho izany àry dia CSB maromaro tany an-toerana no voatery nanidy varavarana. Fanomezan-danja ny lafiny sosialy, indrindra teo amin’ny sehatra ny ara-pahasalamana, nataon’ny Filoham-pirenena Rajaonarimampianina Hery vaindohan-draharaha ny fanokafana indray ireo Centre de Santé de Base (CSB) nikatona nandritra ny fitondrana Tetezamita ireo, ny fanarenana CSB miisa 43 ary fanomezana mpiasan’ny fahasalamana mahay ny asany ho an’ny CSB miisa 48, tamin’ny taona 2015.
Nesorina rehefa tsy nahomby….Efa hita koa fa tsy voafehin’ingahy minisitry ny Filaminam-bahoaka teo aloha ny toe-draharaha tany Antsakabary Befandriana Avaratra, toerana fiavian’ilay senatera mpanohitra mbola hifampitadiavana iny. Andrianisa Mamy Jean-Jacques indray no minisitry ny ...Tohiny
Fikojakojana ny lalana : Natelin’ny CUA aiza ny vola ho amin’ny fanamboarana?
Lalatiana sy Andry Rakotondrazafy : Mahatoky ny filohan’ny SMM ?